ကြိုတင်သိမြင်နိုင်တဲ့ အကြောက်တရား ( Known fear) နဲ့ကြိုတင်မမြင်နိုင်တဲ့ အကြောက်တရား (Unknown fear)မှာ ဘယ်အရာက သင့်ကိုပိုပြီး ကြောက်လန့်စေပါသလဲ….တဲ့။
အမယ်မင်း… ဘလော့ပြန်ရေးကြဖို့ နှိုးဆော်တဲ့ အနှီခေါင်းစဉ်ကြီးက မြင့်မားလေးနက်လွန်း လှပါတကား။ မြေကြီးလက်နဲ့ပုတ် လွဲချင်လွဲဦးမယ်၊ အခုတလော ဆံပင်ဖြူတွေ ပိုတိုးပွားလာရတဲ့အထဲ ဒီTag Postက မြသွေးနီကို ဆံပင်ဖြူနှုန်းတိုးစေမှာတော့ မလွဲ။ သို့သော်ငြား ဘလော့ရွာကြီး ပြန်လည်စည်ကားလာအောင် တီတင့်နဲ့ ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေ စီစဉ်တဲ့ ဒီTag ပို့စ်လေးမှာတစ်တပ်တစ်အားပါဝင်ချင်စိတ်နဲ့အတူ၊ချစ်ခင်လေးစားစိတ်များနဲ့ရေးဖို့အတွက် မြသွေးနီ တစ်ယောက် ကွန်ပျုတာခလုတ် တဂျောက်ဂျောက်နှိပ်လို့ ဦးနှောက်ကို အလုပ် စတင်လုပ်ရပါတော့တယ်။
မြသွေးနီ ငယ်စဉ်က အင်မတန် ကြောက်တတ်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ယုံပါ့မလား။ ကြောက်တာက ဘာမဆိုကို ကြောက်တာ။ လူတွေကို ကြောက်တယ်။ မမြင်ဘူးတဲ့ သရဲကို တွေးကြောက်တယ်။ အမေ့စည်းကမ်းတွေကို ကြောက်တယ်။ ဆရာမကို ကြောက်တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေလဲ ကြောက်တယ်။ အတွင်းသိတွေက နည်းနည်းလောက် ရုပ်တည်ပုံဖမ်းပြီး မျက်နှာထားချီယုံရှိသေး၊ မြသွေးနီခမျာ မျက်တောင်လေး ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်နဲ့ မျက်ရည်ကြည်တွေက မျက်လုံးဝိုင်းကြီးထဲ ပြည့်နေတာမျိုး။ တွန့်လိမ်ပြီးသွားတဲ့ ပိုးကောင်လေးတွေလဲ ကြောက်တယ်။ ရေကူးရမှာကြာက်တယ်။ အမြင့်တက်ရမှာကြောက်တယ်။ စာရေးဆရာမဖြစ်ဖို့ အခြေခံများလားမသိ၊ စိတ်ကူးနဲ့ကြောက်စရာ ဇာတ်လမ်းတွေ ဆင်ပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်ကူးပြီး ကြောက်နေတတ်တယ်။ ဒါတောင် မေ့နေတာတွေ ရှိနိုင်သေးတယ်။
(မြသွေးနီရဲ့ “အိပ်မက်ကောက်ကြောင်း” အမှာစာမှာ ဆရာကြီးလူထု(ဦး)စိန်ဝင်းက မြသွေးနီ
ကြောက်တတ်ခဲ့တာကို အခုလို ထည့်ရေးခဲ့သေးတယ်။ တကယ်ကြောက်တတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သက်သေပြတာပါ။) 🙂
ရယ်စရာပြောရရင် ငယ်ငယ်က တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးတဲ့ မျက်လုံးမှေးမှေးသွားခေါခေါ နှာခေါင်းပြားပြားနဲ့ တရုပ်မကြီး တစ်ယောက်ကို စိတ်ကူးနဲ့တွေးပြီး ကြောက်ခဲ့ဘူးသေးတယ်။ တစ်နေ့ ဈေးထဲကအမှိုက်ပုံက အူဝဲဆိုတဲ့ အသံကြားရလို့ သွားကြည့်ကြတော့ ဘဲဥထည့်တဲ့ သေတ္တာပိနေတဲ့ မွေးစပေါက်ကလေး တစ်ယောက်ကို တွေ့ရတယ်တဲ့။ အဲ့ဒီကလေးရဲ့နှာခေါင်းက ဘဲဥသေတ္တာခွံပိထားလို့ ပြားနေတာတဲ့။ အဲ့ဒီကလေးက မြသွေးနီတဲ့။ အဒေါ်တွေ ၀ိုင်းစကြတာလေ။ မြသွေးနီ နှာခေါင်းပြားတာကို သူတို့ နောက်နေစနေမှန်းသိပေမယ့် ၀မ်းနည်းစိတ်နဲ့ ငိုချင်နေတာပဲ။ ဒီကြားထဲ အမေအရင်းဆိုတဲ့ အဲ့ဒီတရုပ်မကြီးဆီ ပြန်ပို့ရင် ဒုက္ခဆိုပြီး တွေးတွေးပြီး ကြောက်နေလိုက်တာလေ မပြောပါနဲ့။ “အမေက သမီးကို အမေ့ဗိုက်ထဲက ဆရာဝန်ကြီးတွေ ကိုယ်တိုင် ဓါးနဲ့ခွဲပြီး မွေးထုတ်ခဲ့ရတာ၊ ဟောဒီမှာ ကြည့်..” ဆိုပြီး သူ့ဝမ်းဗိုက်က ကင်းခြေမြှားချုပ်ရိုးတွေကို တိုင်တည်ပြောပြမှ မြသွေးနီမှာ စိတ်အေးရတယ်။
မြသွေးနီအလယ်တန်းကျောင်းသူဘ၀ရောက်တော့ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေဆိုအဖေ့အမေ မြသွေးနီရဲ့ အဘွားအိမ်ကို မိန်းမပီသရေးသင်တန်း သွားတက်ရတယ်။ အဘွားနဲ့ မီးဖိုချောင်မှာ ကူညီချက်ပြုတ်၊ အိမ်သန့်ရှင်းရေးစတာတွေ ၀ိုင်းကူလုပ်ပေးရင်း သင်ယူရတယ်။ အဘွားရဲ့အိမ်မှာ အမေ့အိမ်မှာလို ခြံထဲ လက်လက်ထ ကစားခွင့်မရပေမယ့် မြသွေးနီကို မသွားပဲမနေနိုင်အောင် ဆွဲဆောင်ထားတဲ့အရာရှိတယ်။ အဲ့တာက အဆင့်နှစ်ဆင့်သာပါတဲ့ အလျားသုံးပေခန့် နံရံကပ်စာအုပ်စင်လေး။ အဘွားက စာဖတ်ဝါသနာပါတယ်။ သူ့စာအုပ်စင်က စာအုပ်တွေက မြသွေးနီတို့အရွယ်နဲ့ ဖတ်ဖို့ မအပ်စပ်ဘူးလို့ တွက်ထားပုံရတယ်။ ဖတ်ချင်တယ်လို့ ပြောတော့ မဖတ်နဲ့တဲ့၊ ကလေးပဲရှိသေးတယ် ၀တ္တုတွေဖတ်စရာလားတဲ့။ အဲ့ဒီမှာ မဖတ်နဲ့ဆိုတဲ့ စာအုပ်တွေကို အဘွားမသိအောင် အသာလေးခိုးယူဖတ်ရင်း၊ ကြောက်ကြောက်နဲ့ ဖတ်ရင်းစွဲလမ်းရတဲ့ ၀တ္တုတွေကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ မြစင်္ကြာရဲ့ သိုက်သမိုင်းဝတ္တုတွေ။ ဘီလူးတွေ သရဲတစ္ဆေတွေနဲ့ ဖုတ်သဘက် မှင်စာ ပြိတ္တာ၊ ဥစ္စာစောင့်တွေပါတဲ့ အသည်းတထိတ်ထိတ် ရင်တဖိုဖိုနဲ့ဖတ်ရတဲ့ ၀တ္တုတွေ။ ကျောတချမ်းချမ်းဖတ်ရင်း စွဲမှန်းမသိစွဲလန်းတယ်။ ကြောက်မှန်းမသိ အရိုးထဲက စိမ့်ပြီးကြောက်လာတယ်။ ညဘက် လူခြေတိတ်ချိန် ဖယောင်းတိုင်မီး ခြင်ထောင်ထဲ ခိုးထွန်းပြီး အဘွားမသိအောင် တထိတ်ထိတ်ကြောက်စိတ်နဲ့ မြစင်္ကြာရဲ့ သိုက်သမိုင်း ၀တ္တုတွေကို ကြောက်ကြောက်နဲ့ ဖတ်ရတဲ့ အရသာက အခုနေခါ ပြန်ဖမ်းဆုတ်ရင်တောင် ရနိုင်သေးတယ်။
မှတ်မှတ်ရရ ဆယ်တန်းကျောင်းသူဘ၀အထိ တစ်ယောက်ထဲ အိမ်ကတစ်ယောက်ယောက် မပါပဲ ဝေးဝေးလံလံ သွားခဲ့ဘူးတာ မရှိဘူး။ ဒါနဲ့ အမေက ဆယ်တန်းဖြေပြီးချိန်မှာ သွားလာရဲအောင်၊ လူတွေနဲ့ ပြောဆိုတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးတယ်။ လမ်းလျှောက်တာ၊ နေတာထိုင်တာ၊ ၀တ်တာစားတာ၊ ပြောတာဆိုတာကအစ စမတ်ကျကျ သွားလာနေထိုင်ပြောဆိုတတ်အောင် သင်ပေးတော့တယ်။ မြသွေးနီ တက္ကသိုလ်စတက်ချိန်မှာ ထိုက်သင့်တဲ့ ယုံကြည်မှု ရလာခဲ့တယ်။ ကြောက်လန့်စိတ်တွေ လျော့ပါးလားခဲ့တယ်။ အမေကပြောတယ်။ “ အမေက ပြောပေးယုံ လမ်းညွှန်ပေးယုံသာရတာ၊ တကယ်တမ်းက ကြောက်စိတ်ကို သမီးကိုယ်တိုင် တိုက်ထုတ်ပြီး သမီးကိုယ်တိုင် ယုံကြည်စိတ်ကို ဆွဲကိုင်ယူမှရတာ” တဲ့။
ဒီတော့ ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်အခါတုန်းက ကြိုတင်သိမြင်နိုင်တဲ့ အကြောက်တရားဆိုတာကို သိပ်သတိ မထားမိခဲ့ဘူး။ လူကြီးမိဘတွေရဲ့ လမ်းညွှန်မှုအောက်၊ အုပ်ထိမ်းမှုအောက်ကနေ အလိုက်သင့် နေနေယုံလေးပဲဆိုတော့ အနာဂတ်ကို၊ တနည်းအားဖြင့် ကြောက်စရာကောင်း တာတွေက ဘာရယ်ဆိုတာ ကြိုတင်မသိခဲ့ဘူး။ ကြိုတင် မသိမြင်နိုင်တဲ့ အကြောက်တရားကို မှန်းစပြီး ကြောက်နေခဲ့ချိန်လို့ ပြောလို့ရတယ်။
ကြီးပြင်းလို့ အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာတော့ တကယ်ကြောက်ရမှာနဲ့ မကြောက်ရမှာကို အလိုလို ခွဲခြားသိလာတယ်။ အဲ့ဒီလိုသိလာတာနဲ့အမျှ မြသွေးနီရဲ့ ကြောက်စရာကောင်းသောအရာများကလဲ ငယ်ရွယ်စဉ်ကလို မဟုတ်တော့ပဲ ခေါင်းစဉ်တွေ ပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ မြသွေးနီလက်ခံထားတဲ့ ကြောက်စိတ်ဆိုတာက မိမိရဲ့စိတ်သဏ္ဍာန်ပေါ်မှာပဲ တည်နေပါတယ်။ လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် မကြောက်တတ်တဲ့သူဆိုတာတော့ မရှိပါဘူး။ မိမိစိတ်ကို ခိုင်မာအောင် တည်ဆောက်နိုင်သူများက သာမန်လူများထက် ကြောက်စိတ်ပိုနည်းပြီး ယုံကြည်ချက်ရှိသူများ ဖြစ်လာကြပါတယ်။ ခိုင်မာအောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ရုပ်အားထက် စိတ်အားက ပိုအဓိကကျမှာပါ။ စိတ်အားဖြင့် ခိုင်မာအောင်ကလဲ သူများက ကူညီပေးလို့ရတာထက်၊ ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ယူတာမျိုးက ပိုပြီး ခိုင်မာမယ်ထင်ပါတယ်။ “ရဲရင့်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်တော့မှ ကြောက်စိတ်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူက ကြောက်စိတ်ကို အောင်နိုင်ထားဖို့တော့ လိုပါတယ် ”..တဲ့။ နယ်ဆင်မင်ဒဲလား ပြောခဲ့ဖူးတာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်တို တည်ဆောက်ဖို့လိုတာ အမှန်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ်ရှိပြီး ခိုင်မာနေဖို့က ကိုယ်တိုင်ကလည်း ပြည့်နေဖို့ လိုဦးမယ် ထင်ပါတယ်။ မြသွေးနီတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာက “ငါပြောသလိုလုပ်၊ ငါလုပ်သလိုမလုပ်နဲ့” ဆိုတဲ့ အပြောနဲ့အလုပ် ထပ်တူမကျသူတွေ များနေတော့ မခက်ပါလား။ ဒါ့အပြင် စိတ်ရောကိုယ်ပါ တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ ကိုယ့်ရဲ့လိပ်ပြာက ဖြူစင်နေဖို့လဲ လိုပါသေးတယ်။ အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲ တည်ဆောက်နေရင်းက ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ် ပြန်လန့်နေရတာမျိုးကတော့ အကြောက်တကာ့ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးပဲလို့ ထင်တယ်။
မြသွေးနီလည်း အခုထိ ကြောက်တတ်တုန်းပါ။ ဒါပေမယ့် အခုအရွယ်မှာ မြင်ရတဲ့ အကြောက်တရားတွေကတော့ အသက်အရွယ်နဲ့ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုရဲ့ ထိုက်သင့်တဲ့ အတွေ့အကြုံအရ ကြောက်ဖို့လိုလား မလိုလားဆိုတာကို ခွဲခြားသိတတ်နေပါပြီ။ မြင်ရတဲ့ အကြောက်တရားတွေအတွက်ကတော့ သိပ်တုန်လှုပ်မရှိပေမယ့် မမြင်ရတဲ့ အကြောက်တရား အတွက်ကတော့ ကိုယ့်ကိုဘယ်အချိန် အငိုက်ဖမ်းကြောက်စေမလဲဆိုတွေးမိတာမျိုး ရှိပါတယ်။ မမြင်ရတဲ့ အကြောက်တရားအတွက် မြသွေးနီ ဘာတွေကို မှန်းပြီး ကြောက်နေတတ်သလဲ။ ချရေးကြည့်ပါ့မယ်။
-ဘာပဲလုပ်လုပ် တာဝန်မကျေပွန်မှာကို ကြောက်တယ်။
-ဘာပဲလုပ်လုပ် စိတ်ထည့်လုပ်တတ်တော့ ကိုယ့်ရဲ့စေတနာက စေတနာ အမှားဖြစ်သွား မှာကို ကြောက်တယ်။
-ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားကို အထိအပါးခံရမှာ ကြောက်တယ်။
-ကံသုံးပါးကို အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ ကျုးလွန်လိုက်မိမှာ ကြောက်တယ်။
-သေဖို့အတွက် ဘာမှမပြင်ဆင်ရသေးခင်မှာ သေသွားရမှာကို ကြောက်တယ်။
အဲ့ဒီ အကြောက်တရားတွေအတွက် ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားသလဲလို့ မေးလာရင် ထွေထွေထူးထူး စံနစ်တကျ ပြင်ဆင်ထားတာမျိုးထက် နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းတဲ့ဘ၀နေ့ရက်တွေမှာ အသိ သတိလေး ကပ်ပြီး အမှားအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ဖြတ်သန်းကျော်ဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော် ဟောင်ကောင်ကွန်ဖူးမင်းသား ဘရုစ်စလီပြောခဲ့ဖူးတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းက မှတ်သားစရာပါ။
“ လူတစ်ယောက်က တစ်ကြိမ်ထဲမှာ အချက်ပေါင်းတစ်သောင်း ကန်ကျောက်ပြနိုင်တာကို ကျွန်တော် မကြောက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလူဟာ တစ်ကြိမ်လောက်ကန်ကျောက်ပြနိုင်ဖို့အတွက် အကြိမ်ပေါင်းတစ်သောင်း လေ့ကျင့်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် ကြောက်တယ် ”
သူ့ရဲ့ ကြောက်စိတ်အပေါ် တွန်းအားပြန်ရယူလိုက်တဲ့ အမြင်လေးကို မြသွေးနီ အင်မတန်မှ နှစ်သက်ပါတယ်။ ဒီအမြင်လေးက သူ့ရဲ့ဘ၀လမ်းခရီးမှာ အများကြီး အထောက်အပံ့ ပေးစေခဲ့မှာပါ။
ကြောက်စိတ်ဆိုတာ လူတိုင်းမှာ ရှိနေနိုင်တဲ့အရာဆိုပေမယ့် အလွန်အမင်း ကြောက်ရွံ့စိတ် ရှိနေဖို့တော့ မလိုပါဘူး။ အကြောက်တရားတွေနဲ့ ပြည့်နေအောင် အုပ်ချုပ်သူအာဏာရှင်တွေက တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ခဲ့လို့ မြသွေးနီတို့ ပြည်သူတွေ အကြောက်တရားအောက် ပြားပြားမှောက် ခဲ့ရတာကို မမေ့သင့်ပါဘူး။ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်၊ လွတ်စွာရေးသား ထုတ်ဖော်ခွင့်တွေ ဘာဆိုဘာမျှမရခဲ့ပဲ စားဝတ်နေရေးဆိုတဲ့ အရေးသုံးပါး မပြည့်စုံမှာဆိုတဲ့ ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်နေရတဲ့ဘ၀တွေမှာ မြသွေးနီတို့ စီးမျောခဲ့ ရပါတယ်။ ကြောက်နေယုံမျှနဲ့ဆိုရင် ကိုယ်ရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးလက်လွတ် သွားနိုင်တယ်ဆိုတာလဲ သတိချပ်မိပါတယ်။ စိုးရိမ်စိတ်များလွန်းတာကလည်း ကြောက်စိတ်ရဲ့ အစပါပဲ။ ကိုယ့်ရနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးကို ကြောက်ရွံ့မှုမရှိပဲ ကိုယ်တိုင် စိတ်အေးအေးနဲ့ ဖန်တီးရယူနိုင်ဖို့ကလဲ လိုအပ်လှပါတယ်။
ငယ်စဉ်က သိပ်ကြောက်တတ်ခဲ့တဲ့ မြသွေးနီကို အမေက တဖွဖွ ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။
“ သမီး…ကြောက်တတ်တဲ့သူက နှစ်ခါပြန်ရှုံးနိမ့်ရတတ်တယ်၊ ဒီတော့ ဘာမဆို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ရင်ဆိုင်ပါ” တဲ့။
အဲ့သလိုဆိုလို့ မြသွေးနီတစ်ယောက် အကြောက်တရား မရှိတော့ဘူး မထင်ပါနဲ့။ မြသွေးနီ ကြောက်တတ်ဆဲပါ။ အထူးသဖြင့် မမြင်ရတဲ့ လက်ဆုတ်လက်ကိုင် မပြနိုင်ပဲ အလစ်ဝင်လာမယ့် အကြောက်တရားများကိုပေါ့။ မဖြစ်မနေ အကြောက်တရားနဲ့ သူတင်ကိုယ်တင် ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ ရင်မဆိုင်ခင် ကြောက်ကန်ကန်ပြီး မြသွေးနီတစ်ယောက် တိုးတိုးလေး အော်မိတာ တစ်ခွန်းရှိပါတယ်။
“ ကြောက်တယ်ဆိုတာ ချိုနဲ့လား….”
(Tag Postခေါင်းစဉ်လေး ရွေးချယ်ပေးခဲ့တဲ့ ချစ်ညီမနှင်းနဲ့မာယာကို ကျေးဇူးတင်စွာနှင့် အကြောင်းအရာက ခေါင်းစဉ်ကနေ သွေဖီနေခဲ့မယ်ဆိုရင် မေတ္တာစိတ်ဖြင့် ဖတ်ရှုပေးပါလို့…။)
Posted in အက်ဆေး/ ရသစာတမ်း	|5Comments
Number of View: 15457
သူက ကျွန်မကို မျက်လုံးတစ်ချက်ဝင့်ကြည့်ပြီး –
“လွတ်လပ်စွာရေးသား ထုတ်ဖော်ခွင့်ကိုကာကွယ်ရန်နှင့် သစ်လွင်သော စာပေယဉ်ကျေးမှု ပေါ်ထွန်းလာစေရန်” ဆိုတာက PEN Myanmar ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး၊ PEN Myanmar ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ –
Posted in PEN Myanmar	|5Comments
Number of View: 7984
[၁၉.၇.၂၀၁၃ – အာဇာနည်နေ့တွင် ပဲခူးတိုင်း၊ ကျောက်တန်းစံပြကျေးရွာရှိ ပန်းပျိုးလက် ဘုန်းတော်ကြီးပညာသင်ကျောင်း၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် စာပေဟောပြောပွဲသို့ စာရေးဆရာများနှင့်အတူ လိုက်ပါသွားသည့် ခရီးတိုလေးအား အမှတ်တရ ပြန်လည်ရေးဖွဲ့ပါသည်။ ]
– လိပ်စာ –
Number of View: 9870
သြဂုတ်လ (၃၁)ရက်နေ့မှာ ကျရောက်ခဲ့တဲ့ ဘလော့ဒေးမှာ ဘလော့ပို့စ်တင်ဖို့ အခွင့်အရေးမရခဲ့ပါဘူး။ ပိတ်ရက် စနေ၊ တနင်္ဂနွေဆို ပို့စ်တင်ဖို့ရာအထိ အင်တာနက်အသုံးပြုဖို့ အဆင်မပြေလှပါဘူး။ ဒါနဲ့ ဖေ့ဘုတ်မှာပဲ ဘလော့ဒေးအတွက် စာတွေလိုက်ဖတ်တော့ ပန်ဒိုရာ၊ မကေနဲ့ ကိုရန်အောင်တို့ရဲ့ ပို့စ်တွေ ဖတ်ခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။
မနေ့ညက ရေးထားတဲ့ ဒီပို့စ်ကို မနက်ရုံးရောက်တော့ တင်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် ရုံးက တယ်လီဖုန်းလိုင်းက ခါတော်မီ ပျက်နေပြန်တော့၊ ADSLလိုင်းမို့ အင်တာနက် သုံးမရပြန်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ ပို့စ်တင်ဖို့နောက်ထား၊ ဖုန်းပြင်ဖို့ အရင် လုံးပမ်းရပြန်ပါတယ်။ အခုတော့ Blog Day ပို့စ်တင်သူတွေထဲမှာ နောက်အကျဆုံးအဖြစ်နဲ့၊ မျက်နှာပူစွာ တင်လိုက်ရပါတယ်။
ကျွန်မက တကယ်တော့ ဟိုမကျဒီမရောက်နဲ့ စာမျက်နှာပေါ်မှာရော အွန်လိုင်းပေါ်မှာ စာရေးဖြစ်နေသူ တစ်ဦးပါ။ များသောအားဖြစ်က ကျွန်မကို အွန်လိုင်းမှာ စာရေးနေတဲ့ ဘလော့ဂါတစ်ဦးအဖြစ် သိကြတာများပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှာ ဘလော့ဂါတစ်ဦးဖြစ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ အခြေအနေကိုလဲ အင်မတန်မှ တန်ဘိုးထားမိပါတယ်။
၁၉၉၀ ခုနှစ်၊ ပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်းရဲ့ ကလောင်သစ်ကဏ္ဍမှာ စာလေးနှစ်ပုဒ်သုံးပုဒ်စ ခြေချပြီးချိန် က၊ျွန်မလေးစားရတဲ့ စာရေးဆရာများ နိုင်ငံရေးပုဒ်မနဲ့ တဖြုတ်ဖြုတ် ထောင်ထဲရောက်ကုန်ကြ ပါတယ်။ အဲ့ဒီကာလက စာရေးဆရာများက အင်မတန်မှ လက်သံပြောင်ကြပြီး၊ အုပ်ချုပ်သူစစ်အစိုးရကလဲ စာရေးဆရာဆို နိုင်ငံရေးလုပ်သူတွေပဲလို့ တံဆိပ်ကပ်ခံရတဲ့ အချိန်ပါ။ ရေးသမျှစာတွေကို စာပေစီစစ်ရေးက ငွေမှင်ပျော်ပျော်ကြီး သုတ်ကာ ဆင်ဆာဖြတ်ခံနေချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးဆရာတွေခမျာ ကိုယ်မွေးထုတ်ထားတဲ့ သားသမီးလေးတွေ ခြေ၊ လက်အဖြတ်ခံနေရတော့ အင်မတန်မှ ရင်နာကြရချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလည်း ဆက်ရေးနေကြတာပဲ။ အဲ့ဒီအချိန်က ကျွန်မ ၁၉နှစ်သမီးအရွယ်သာသာ စာရေးဖို့ အားယူကာစ အချိန်။ ကျွန်မရဲ့ စာမူတချို့ ဆင်ဆာမိတယ်။ ပယ်တယ်ဆိုတာ ကြားရတော့ ကျွန်မစာရေးချင်စိတ်ကို ဖိနှိပ်ခံလာရသလိုပါဘဲ။ ဒီလိုနဲ့ စာရေးဆရာများရဲ့ မဂ္ဂဇင်းစာ မျက်နှာပေါ်က စာတွေကို မတရားသဖြင့် ခုတ်၊ ထစ်။ လှီး၊ ဖြတ်ခံနေရချိန်မှာ ကျွန်မ စာဆက်ရေးဖို့ လုံးဝမှ စိတ်လျှော့လိုက်မိပါတယ်။
စာမရေးပဲ မနေနိုင်တဲ့စိတ်ကြောင့် ကျွန်မစာတွေကို အိမ်က မှတ်စုစာအုပ်လေးထဲမှာပဲ ရေးသိမ်း ထားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း စာရေးဖို့ထက်၊ စာဖတ်ဖို့ဘက်ကို ကျွန်မ ပိုပြီး အားသာ သွားပါတယ်။ မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာပေါ်က ငွေမှင်သုတ်ထားတဲ့ စာများကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဖျက်၊ ရအောင် ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ အရသာကို မမေ့သေးပါဘူး။ ၀တ္တုတို/ရှည် အားလုံး ၀ါးစားနေသလို ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကာလဆိုလဲ မမှားပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ၀တ္တုတိုလေး နှစ်ပုဒ်၊ သုံးပုဒ်နဲ့ ကျွန်မ စာမျက်နှာများနဲ့ ဝေးကွာခဲ့ရပါတယ်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်မှာ ကျွန်မအလုပ်မှာ အင်တာနက် စသုံးခွင့်ကြုံလာပါတယ်။ အင်တာနက် စသုံးသူတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း စမ်းတ၀ါးဝါးနဲ့ မွှေလို့ နှောက်လို့ မ၀တဲ့အချိန်ပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ ပြည်ပမှာ ပညာတော်သင်ရောက်နေတဲ့ မတ်ကလေးက စာဖတ်ဝါသနာပါမှန်းသိတဲ့ ကျွန်မကို လင့်ခ်နှစ်ခု ဖတ်ကြည့်ဖို့ မျှဝေပါတယ်။ အဲ့ဒီလင့်ခ်နှစ်ခုကို အခုထိ မှတ်မိသေးပါတယ်။ အဲ့တာက နိုင်းနိုင်းစနေနဲ့ နစ်နေမန်းတို့ရဲ့ လင့်ခ်ပါပဲ။ အဲ့ဒီမှာ ကျွန်မလည်း ဒီဆိုက်နှစ်ခုကို မခွဲနိုင် မခွာရက်ဖြစ်ပြီး တစိုက်မတ်မတ် ဖတ်မိပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာ ကျွန်မ ဘာကိုသတိပြုမိသလဲဆို သူတို့ရေးထားတဲ့စာတွေက ပေါ့ပါးကောင်း ပေါ့ပါးနေမယ်၊ တိုကောင်းတိုနေမယ်။ သို့သော် သူတို့စာတွေက လွတ်လပ်မှုအငွေ့အသက်တွေ လွှမ်းခြုံထားတယ်။ သူတို့စိတ်တွေကို အနီးစပ်ဆုံး လှမ်းဖတ်လို့ မြင်နိုင်တဲ့အထိကို စာဖတ်သူအနေနဲ့ ခံစားမိရစေတယ်။ ပုံနှိပ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ စာပေစီစစ်ရေးအောက် ကြပ်ကြပ်တည်းတည်းနဲ့ ချုပ်ချယ်ခံ၊ ပယ်ဖျက်ခံရပြီးမှ ဖတ်ခွင့်ရနေတဲ့ စာရေးဆရာများရဲ့လက်ရာများနဲ့ ကွဲပြားခြားနားနေတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ကျွန်မ ငြိတော့တာပါပဲ။
ကျွန်မ အွန်လိုင်းက စာတွေကို တရှိုက်မက်မက် ဖတ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်မ စွဲစွဲလမ်းလမ်း စတင်ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ ဆိုက်တွေက ကပ်ပါပေ့ကိုပီကေ၊ ရန်အောင် (ရေခဲငှက်)၊ တေဇာ(လရောင်လမ်း)၊ မေဓာဝီ၊ နေဘုန်းလတ်၊ ပန်ဒိုရာ၊ ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်နဲ့ ညီလင်းသစ်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ စာဖတ်သက်လေးရလာတော့ ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ယုံနဲ့ လင့်ခ်တွေ ဆင့်ကဲရှာနေနိုင်ပြီး၊ အဲ့ဒီကမှတဆင့် ကျွန်မ အွန်လိုင်းပေါ်က စာဂျပိုးဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ အွန်လိုင်းက ဘလော့ဂ်တော်တော်များများရဲ့ စာတွေ ဖတ်ဖြစ်လာတယ်။ အဲ့ဒီလို အွန်လိုင်းဆိုတာကြီးမှာ စာတွေ ရေးတတ်သူတွေကိုလဲ အားကျမိလာတယ်။
၂၀၀၉ခုနှစ်ရဲ့ နှစ်လည်ပိုင်း တစ်နေ့မှာ မမျှော်လင့်ပဲ ချော (အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) နဲ့ အော်ရိုရာနယူဂျင်နရေးရှင်း ဆိုတဲ့ ဂူဂဲလ်းမေးလ်ဂရု(ပ)တစ်ခုကနေ သတင်းတွေ ပို့ပေးတဲ့ဆီမှာ မန်ဘာဝင်မိကြရင်း ခင်မိကြတယ်။ သူက အဲ့ဒီတုန်းက ဘလော့မှာ မရေးသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သိပ်မကြာခင်မှာ သူက ပလန်းနက်မှာ အလှအပရေးရာတွေ ရေးနေတာသိလာရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ခုန အော်ရိုရာက မေးလ်တစ်ခုမှာ ညစ်ညမ်းစာရေးသူ တစ်ယောက်ရဲ့ မေးလ်တွေ တက်လာတာကြောင့် စာဖတ်သူတိုင်း စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရပြီး အပြန်အလှန် ရေးနေကြတာတွေ ဖတ်ရလို့၊ အဲ့ဒီအကောင့်ကို ဖြုတ်ပေးဖို့ အက်ဒမင်ဆီ မေးလ်ပို့ ဆက်သွယ်မိပါတယ်။ အဲ့ဒီကနေ အက်ဒမင် မောင်လေး ဘုန်းကြီး (မိတ္ထီလာသား – လူနာမည်မှာ ဘုန်းပါလို့အဲ့လို ခေါ်တာပါ)နဲ့ ညီမ ထွဋ်ထွဋ်တို့ကို ခင်မင်ခွင့်ရခဲ့တာ အခုထိပါပဲ။ ဘုန်းကြီးက သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အော်ရိုရာနယူဂျင်နရေးရှင်းကို Ning Site အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ကျွန်မကို စာရေးဖို့ ကျွန်မကို ပြောပါတယ်။ နည်းပညာမှာ ဇီးရိုးနောလှစ်ဆိုပေမဲ့ စာရေးချင်နေတဲ့ စိတ်အခံက အဲ့ဒီမှာ ကြွတက်လာပါတယ်။ ဘုန်းကြီးက ကျွန်မကို ရေးနည်းတွေ သင်ပေးပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ စမ်းတ၀ါးဝါးနဲ့ အော်ရိုရာမှာ ရေးနေရင်း Ning Site ဆိုတာ ဆိုရှယ်ဆိုက်၊ အများပြည်သူဝင်ရေးနိုင်တယ်ဆိုတာ သိခဲ့ရတယ်။ ၀ါသနာရှင်တွေရဲ့ လက်ရာမျိုးစုံကို တချိန်ထဲမှာ ဖတ်ခွင့်ရနေတယ်။ အဲ့ဒီအချိန် ချောက သူ ဘလော့တစ်ခု စမ်းသပ်လုပ်နေတယ်၊ ရရင် အစ်မကို တစ်ခုလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ ကျွန်မ ဖွားကျိုင်းတုတ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက် ၂၀၀၉ခုနှစ်ရဲ့ နှစ်ကုန်ကာနီးမှာ ချောရဲ့ ကောင်းမှုနဲ့ ကျွန်မ ၀က်ဘက်ဆိုက်လေး တစ်ခုကို WordPressနဲ့ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက အချိန်ကာလတွေဟာ အင်မတန်မှ လွမ်းမောဖွယ်ရာပါ။ ဆယ်စုနှစ် နှစ်စုနီးပါး မှတ်စုစာအုပ်ထဲ သိမ်းကျုံးရေးထားသမျှ ဘလော့မှာ တစ်နေ့တစ်ပုဒ် မှန်မှန်တင်ခဲ့တယ်။ ချောကလဲ ကျွန်မလိုပဲ တစ်နေ့တစ်ပုဒ်သမားပေါ့။ တစ်ခါတလေ သူနဲ့ကျွန်မ ဖုန်းချိန်ပြီး “အစ်မ ဒီနေ့တင်ပြီးပြီလား” “ချောရော မတင်သေးဘူးလား”နဲ့ အပြိုင်ကျဲခဲ့ကြချိန်တွေပေါ့။ နှစ်ယောက်သားအပြန်အလှန် ဘလော့တွေ လမ်းညွှန်ရင်း အင်မတန် ပျော်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နှစ်ယောက်သား စာဖတ်သူတွေ ရလာသလို၊ ဘလော့ဂါတွေနဲ့လဲ ကွန်မန့်တွေ အပြန်အလှန် ရေးရင်းက ခင်မင်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ အံ့သြစရာတစ်ခုကို ကျွန်မကြားဖြတ် ပြောချင်ပါတယ်။ ဘလော့ဂါတွေဟာ အွန်လိုင်းမှာ စာတွေဖတ်ရင်း အချင်းချင်း မိတ်ဆွေရင်းတွေလို ရင်းနှီးခင်မင်နေကြတာဟာ အင်မတန် အံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်ပြီး၊ ဒါကလဲ ရှေးရေစက်တစ်ခုလို့ ထင်မိပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာ The Gardener၊ WeSheMe၊ မြစ်ကျိုးအင်း၊ ကိုဇော်၊ ချစ်ကြည်အေး၊ မယ့်ကိုး၊ အိမ့်ချမ်းမြေ့၊ ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)၊ သက်ဝေ၊ Sosegado၊ ရွှေစင်ဦး၊ တီတီဆွိ၊ ခင်ဦးမေ၊ နှင်းနဲ့မာယာ၊ ကိုကြီးကျောက် (ရွှေရတုမှတ်တမ်း)၊ သဒ္ဓါလှိုင်း၊ ရွှေပြည်သူ၊ ဇီဝက(ဆေး-၂) ၊ သက်တန့်ချို၊ ပန်းရင့်ရောင် စတဲ့ ဘလော့ဂါများရဲ့ စာများကို အလွတ်မပေးဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆရာမမေငြိမ်း၊ ဆရာမ မိုးချိုသင်း၊ ဆရာမ ခက်မာတို့ကိုပါ ဘလော့မှာ တွေ့လိုက်ရချိန် ကျွန်မ သိပ်နှစ်သက်မိတဲ့ စာရေးဆရာမများမို့ ၀မ်းမြောက်စွာနဲ့ သူတို့ဆိုက်တွေမှာ စာတွေ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်အထိ ဘလော့ဂါများနဲ့ ခင်မင်စကားပြောခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ဘလော့ဂါတော်တော်များများရဲ့ စာတွေကို တစ်နှစ်လောက် တစိုက်မတ်မတ် ဖတ်ပြီးချိန်မှာတော့ သူတို့တွေနဲ့လဲ ခင်မင်ခွင့်ရလာတယ်။ စာတွေကို ဖတ်ပြီး ကွန်မန့်ပေးခဲ့တာတွေ ရှိသလို၊ ဆိုင်းလင့်ရီဒါအနေနဲ့လဲ ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘလော့မှာ စာရေးနေတုန်း ချောကလက်၊ မြန်မာသူငယ်ချင်းများနဲ့ Ning Site အချို့မှာ စာတွေ တစ်ပြိုင်နက်ထဲ ၀င်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက ဘလော့စပေါ့က ၀င်ဖတ်မရအောင် ပိတ်ထားတာမို့ ကျွန်မတို့ ကျော်၊ ခွ ဖတ်ခဲ့ရတာတွေကလဲ အမှတ်ရစရာပါပဲ။
ဘလော့မှာ ဘလော့ဂါမြစ်ကျိုးအင်း စီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ အွန်လိုင်းရသ၀တ္တုတိုရွှေဆုပေးပွဲကိုလဲ ကျွန်မ ကျော်သွားလို့ မဖြစ်သေးပါဘူး။ ဒီပွဲလေးမှာ ပုံနှိပ်မီဒီယာက အစဉ်အလာရှိ စာရေးဆရာ/ဆရာမကြီးများ၊ အယ်ဒီတာများက အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးခဲ့ကြတာပါ။ ဒီပွဲလေးမှာ ရွှေဆုရခဲ့ခြင်းက ကျွန်မ စာတွေကို ပုံနှိပ်မဂ္ဂဇင်းပေါ်မှာ ပြန်ရေးဖြစ်ဖို့ တွန်းအားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပုံနှိပ်စာမျက်နှာပေါ်က ကျွန်မရဲ့ဆရာသမားများနဲ့ ပြန်လည် ဆုံတွေ့ခွင့်ရခဲ့ပြီး၊ သူတို့ရဲ့ ဖေးမမှု၊ အားပေးမှုနဲ့ ကျွန်မ ယခုအခါမှာ ဘလော့မှာရော၊ ပုံနှိပ်မဂ္ဂဇင်းများမှာပါ စာရေးခွင့် တဖန် ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဘလော့မှာ စာရေးဖြစ်တာက ကျွန်မအတွက် အကျိုးကျေးဇူး များစွာရခဲ့တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ နည်းပညာနဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ်ထိတွေ့ခွင့်ရရှိခဲ့တယ်။ ရေခြားမြေခြားက ဘလော့ဂါများနဲ့ ရင်းနှီးခင်မင်ခွင့်ရတယ်။ ဟိုး အရင် ကျွန်မ အွန်လိုင်းပေါ် စာမရေးခင်ထဲက နှစ်သက်ခဲ့ရတဲ့ ဘလော့ဂါများနဲ့ ယခုအခါ ခင်မင်ခွင့်ရနေခဲ့တာ တကယ့် အိပ်မက်ပါပဲ။ ပုံနှိပ်မှာ ဖတ်ခွင့်မရခဲ့တဲ့ စာများကို အွန်လိုင်းကနေ ဖတ်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ ဘလော့ဂါတွေရဲ့ သွေးစည်းညီညွတ်မှုအဖြစ် ဧရာဝတြီမစ်ဆုံအရေးမှာ တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်အားဖြည့်ခွင့် ရခဲ့တာကလဲ အမှတ်တရပါဘဲ။
ဘလော့ဂါဆိုတာ အွန်လိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက် တည်ဆောက်ပြီး အချိန်ပေးကာ၊ ၀ါသနာအရ မိမိနှစ်သက်ရာ၊ အားသန်ရာများကို တစိုက်မတ်မတ် ရေးသားနေသူများလို့ ကျွန်မလက်ခံထားပါတယ်။ အခုအခါမှာ ကျွန်မအပါအ၀င် ဘလော့ဂါ အတော်များများ ဖေ့ဘုတ် စာမျက်နှာထက်မှာ ရောက်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကို တော်တော်များများက ဖေ့ဘုတ် သုံးသူများကို ဘလော့ဂါများရယ်လို့ နားလည်မှု လွဲမှားနေကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဖေ့ဘုတ်မှာ အဖြူအမည်းမသိပဲ Like တွေ ရနေကြသူများကို ဘလော့ဂါလို့ ထင်ကြပါတယ်။ အမှန်က ဖေ့ဘုတ်က ဆိုရှယ်စာမျက်နှာပါ။ သူများအိမ်အလည်သွားလို့ အခန်းလေးတွေ ကန့်လို့ စုဝေးနေကြတာမျိုးပါ။ ဘလော့ကတော့ ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးမှာ နေနေကြသူများလို့ မြင်လွယ်အောင် ပြောပြချင်မိပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးတွေနဲ့ စာရေးသူ ဘလော့ဂါများက၊ အများထံ မျှဝေချင်လာတဲ့အခါမှာ အခန်းလေးတစ်ခန်းလာကန့်ပြီး သူများတွေနဲ့ လာရောနှောနေမိတာပါ။ ရှင်းကာမှ ပိုရှုပ်သွားပြီလားမသိ။
ဖေ့ဘုတ်ရဲ့ အားသာချက်က မြန်တယ်၊ အများထံ ပျံ့နှံ့လွယ်တယ်။ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ စာရေးကောင်းသူတွေ အများကြီးကိုလဲ တွေ့ရပါတယ်။ နယ်ပယ်အသီးသီး အလွှာအသီးသီးက သူများ ဖေ့ဘုတ်မှာ ပါဝင် စီးမျောကြပါတယ်။ ကျွန်မအပါအ၀င် ဘလော့ဂါ အတော်များများလဲ ဖေ့ဘုတ်မှာ တ၀ဲရယ်မှ တလည်လည်နဲ့ ဘလော့ဘက် မလှည့်နိုင်တာကို တွေ့နေရပါတယ်။ ဒီနေ့ကစပြီး ဘလော့ဘက် ပြန်လှည့်ကြစို့၊ အရင်လို ပို့စ်တွေ တပျော်တပါး ရေးကြစို့လို့……. ကျွန်မ မတိုက်တွန်းလိုပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လဲ ဘလော့မှာ စာတွေ ဟိုး အရင်လို အစဉ်မပြတ်ရေးနိုင်ဖို့ အားထုတ်ရမဲ့သူ ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘလော့ဂါများ ဘလော့မှာ ပို့စ်လေးတွေရေးပြီးတိုင်း ဖေ့ဘုတ်မှာ လင့်ခ်လေးတွေ ပြန်Shareပေးရင် ဘလော့ဂါတွေ အဆက်သွယ်မပြတ် စာတွေ ဖတ်ဖြစ်နေမယ် ထင်ပါတယ်။
ခုနတင် ကျွန်မ ဘလော့ဂ် ၀င်စစ်တော့ ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလကနေ ယနေ့အထိ ဘလော့မှာ စာစရေးဖြစ်ခဲ့တာ ၁၁၅ နိုင်ငံက စာဖတ်သူ ၂၀၇၈၉၈ယောက် ရှိနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ အားလုံးက တကယ် စာဖတ်ဖို့ရောက်လာသူများ မဟုတ်နိုင်ပဲ၊ မျက်စိလည်လမ်းမှား ရောက်လာတာမျိုးတွေလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လာရောက်သူအများဆုံး (၅)နိုင်ငံကို အစဉ်အတိုင်း ရေးရရင် စကာင်္ပူက အများဆုံးဖြစ်ပြီး မြန်မာ၊ အမေရိက၊ မလေးရှားနဲ့ ထိုင်းတို့ အသီးသီး ဖြစ်ကြပါတယ်။ စာလာဖတ်သူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စကား ပြောလိုပါတယ်။ ကျွန်မဘလော့မှာ Categories ၂၄ခုခွဲပြီး ရေးခဲ့ပါတယ်။ အများဆုံးရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Categories က ၀တ္တုဖြစ်ပြီး (၆၅) ပုဒ် ရေးသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မက မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေထိုင်ပြီး ဘလော့ရေးနေသူ ဖြစ်တာမို့ ပို့စ်တင်ချိန် အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်နှေးတဲ့ ဒဏ်ကိုတော့ ကောင်းကောင်းခံနိုင်ရည် ရှိနေပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဘလော့ကို အင်မတန် သံယောဇဉ်ကြီးပါတယ်။ တတ်နိုင်တဲ့ နောက်ဆုံး အချိန်အထိ ဇွဲနဘဲနဲ့ ဘလော့ဂင် Blogging သွားမှာပါ။
Blog Day နေ့က အိမ်ကနေ မနေနိုင်တော့ပဲ ဖုန်းနဲ့ ဖေ့ဘုတ်မှာ ကောက်ခြစ်လိုက်တဲ့ စာစုထဲကအတိုင်း –
“၁၉၉၀ မှာ မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာမှာ စာတွေ ဦးစွာ ရေးခဲ့ရလို့ စာမျက်နှာက ကျွန်မရဲ့ငယ်ချစ်လို့ ဆိုခဲ့ရင်… Blogမှာ စာတွေကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်နှစ် ကုန်ကာနီးကနေ ယနေ့အထိ ရေးဖြစ်နေခဲ့တာဟာ၊ ငယ်ချစ်ဦးနဲ့ အိမ်ထောင်ကျခွင့်ရတာလို့ ကျွန်မ ကျေနပ်စွာ ခံယူမိပါတယ်”
လို့ ထပ်မံ ပြောခွင့်ပြုပါ။
မြန်မာဘလော့ဂါများအားလုံး စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာစွာဖြင့် လွတ်လပ်စွာ ဘလော့ဂင်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ချွေလျှက် –
“ Happy Belated Blog Day! ”
Number of View: 14112
အစ်မသက်ဝေ၏ အိတ်မှောက်ဖာသွန် နှစ်ဆယ့်ခွန် Tag Postအား ချစ်ခင်ခြင်းများစွာဖြင့် ရေးရန် မနေ့က တစ်နေ့လုံးအားယူခဲ့သော်ငြား၊ မြကျွန်ုပ် အလုပ်ရှုပ်နေလိုက်သည်မှာ ယခုတော့ ၂၈.၈.၂၀၁၃မှ ရေးနိုင်ချေပေပြီ။ သို့ကမို့ ကိုညီလင်းသစ်ခေါင်းစဉ်ပေးသကဲ့သို့ “အိတ်မှောက်သွန်ပစ်၊ နှစ်ဆယ့်ရှစ်” ဟုပင် ဘလော့ဂ် ခေါင်းစည်းကို ခွင့်မတောင်းပဲ ခပ်တည်တည် ,ယူကာ ကဗ္ဗည်း ထိုးလိုက်ရတော့၏။ (ကိုညီရေ… ခွင့်လွှတ်…) 😀
အနှီအိတ်အတွင်းမှ ပစ္စည်းပစ္စယာများအား ဖောက်သည်ချရလေသော် –
ခိုးလိုးခုလုဖြစ်နေလို့ - 59820 hits